Linux သင်တန်း — MYSTERY ZILLION
July 2009 edited February 2011 in Linux/Unix
Linux သင်တန်း တက်ရင် ဘယ်မှာ တက်ရင် ကောင်းမလဲ အကြံပြုကြပါဦး :77::77::77:
linux lab :d
Linux Lab +++> in MICT Park
သီးသန့်သင်ချင်တာလား သင်တန်းသဘောမျိုး သင်ချင်တာလား?
ကျနော်တက်မှာမဟုတ်၀ူး ကျနော့်အစ်ကိုတက်မှာ ဗျ သူူ့.ကိုမေးကြည့်လိုက်ဦးမယ်နော် အစ်ကို အင်ဖို
Linux သင်မယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်လည်း Linux သုံးမှ နောက်ပြီးတော့ သုံးရင်လည်း Internet ရှိမှ ဖြစ်မှာ။ နောက်မို့ဆို သင်တုန်းပဲ တတ်မှာ.. မသုံးဖြစ်ရင် မေ့ရော.. သူ့မှာအဓိက ပိုင်းက terminal ပဲ။ သူ့ command တွေကို မှတ်မိဖို့လိုတယ်။ GUI ပါလာပေမယ့် terminal မှာ သုံးရတာ ကျွန်တော်တော့ ပိုသဘောကျတယ်။ နောက်ပြီး လိုအပ်တာတွေကို install လုပ်ဖို့ကလည်း internet ရှိအုံးမှလေ။
ူူlinux lab မှာ linux ကို basic,inter,advance ဆိုပြီးခွဲထားတယ်။basic မှာ command နဲ့ရင်းနှီးအောင် သင်ပေးတယ်။inter မှာ server တွေကို install လုပ်တာသင်ပေးတယ်။ကျွန်တော်က inter တန်းပြီးသွားပြီ။
တချို linux သင်တန်းတွေက သင်တန်းသားကို သေသေချာချာ မရှင်းပြနိုင်ပါဘူးဗျာ ...
သင်တဲ့ ဆရာ ၊ ဆရာမ ကလဲ ကိုယ်သင်တာကသာ linux ၊ သူတို့တောင် ရည်ရည် လည်လည် မသိဘူး ၊ ကျောင်းသားမေးတဲ့ေ့ကြာင်းကို ရှင်းလို့မရရင် Config ကို တောင် copy ကူးပီးတော့မှ
ကိုယ့် computer ထဲ ထည့်ပီး အဆင်ပြေအောင် သင်ကြားပြသပေးကြတယ်ဗျ။
သင်တန်းတွေက ဆရာ၊ ဆရာမတွေ လဲ တကယ်ကို ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် တက်သိနားလည်ထားဖို့လို တယ်လို့တော့ ကျွန်တော် တွေးကြည့်ဖူးတယ်ဗျ။ ဒီလိုပဲ သွားနေရင်တော့လားဗျာ .... ကိုယ့်ဟာကိုပဲ စဉ်းစား ကြည့်လိုက်ကြပါတော့ ....။
hlabhonemaung wrote: »
Linux မှမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ ဒီက သင်တန်းတော်တော်များများ အဲဒီလိုပဲ ထင်တယ်။ မတတ်တခေါက် နဲ့သင်တန်းဆရာ ဖြစ်နေတာ အပုံကြီးရယ်။ ကျွန်တာ့လောက်တောင် Programming မရတဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ဆို သင်တန်းတစ်ခု မှာ ဆရာဗျ။:D Data recovery မလုပ်တတ်, Window admin password မကျော်တတ် တဲ့ A+ ဆရာတွေလည်း အများသားနော်။ ကိုယ်တွေ့:D ။ ဒါတွေက ကျောင်းသားတွေနဲ့လည်းဆိုင်တယ်ဗျ။ အားလုံး ဆရာတွေပဲ အားကိုးလို့မရဘူး။ နောက်ပြီး တစ်ကယ်ရူးသွပ်မှ သင်တန်းတက် လေ့လာလိုက်စားစေချင်ပါတယ်။ အားနေလို့၊ အဖော်ကောင်းလို့၊ သူများကောင်းတယ်ပြောလို့ Subject တောင်ဘာမှန်းမသိ သင်တန်းတက်ကြတဲ့ လူတွေလည်း အမျာကြီး။ ဒီကလူတွေက internet သုံးနည်းတောင် သင်တန်းတက် ရမယ်ထင်နေကြတာ။ Mouse တောင်ကောင်းကောင်း မကိုင်တက်ဘဲ အင်တာနက် သင်တန်း လာတက်တဲ့ လူတွေကို သင်ပေးခဲ့ဖူးတယ်။ တကယ်စိတ်ညစ်ရတယ်ဗျာ။ လိုချင်တဲ့ button ကို Mouse နဲ့နှိပ်ဖို့ ၅ မိနစ်လောက် အချိန်းပေးရတယ်။ အဆိုးဆုံးက English အားနည်းတာပဲ။ Register ဆိုတဲ့ စာလုံးပေါင်း မသိတဲ့လူကို Gmail အကောင့်သစ်လုပ်ဖို့ သင်ပေးရတာ စဉ်းစားသာ ကြည့်တော့။ ဒါကြောင့် ဘာသင်တန်းမှ မတတ်ခင် English ကောင်းအောင် အရင်ကြိုးစားစေချင်ပါတယ်။ စာဖတ်မပျင်းဘဲ English ကောင်းရင် ဘာသင်တန်းမှ အားကိုးနေစရာ မလိုတော့ဘူး။ ကိုယ်တစ်ကယ် ရူးသွပ်ဖို့ပဲလိုတယ်။
[FONT=&quot]ဟုတ်ကဲ့...မြန်မာနိုင်ငံမှာ Linux နဲ့ပတ်သက်လို့သင်တန်းတက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ The Linux Lab ရှိပါတယ်... လိပ်စာက B(4), R(6), Myanmar Info-Tech , Hlaing Campus, Yangon. ဖုန်း-၆၅၂၂၄၂ ... ၆၅၂၂၄၃ တို့ကို ဆက်သွယ်ပြီးမေးကြည့်လို့ရပါတယ် ... [/FONT]
[FONT=&quot]သင်ကြားမဲ့ Course တွေကတော့[/FONT]
[FONT=&quot]-Networking & Linux Administration (Course)[/FONT]
[FONT=&quot]-LPI(Certification Course) (CERT001)[/FONT]
[FONT=&quot]-Novell (Certified Linux Administrator) (CLA)[/FONT]
Which website is good to learn linux.Please give me suggestion.
ခုမှကိုယ့်ဘာသာ ကိုလေ့လာချင်ရင်ကော ဘာတွေလုပ်ရမလဲခင်ဗျာ
ဥပမာ။ ။ဘယ် linux software ကို၀ယ်ရမလဲ
ပြီးတော့ ဘယ်စာအုပ်ကို လေ့လာရမလဲခင်ဗျာ
လင်းနစ်ဆော.ဖ်၀ဲလ်တွေ ၀ယ်လို.ရတာတော.မတွေ့ဖူးသေးဘူး နိုင်ခြံကား ဖိုရမ်တွေမှာ တော.တွေ့ဖူးတယ် အဲ့မှာတော. ဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို.ရတယ်
စလေ့လာချင်ရင်တော့ Linux Distro တစ်ခုကိုကိုယ့်အိမ်မှာတင်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲ။ စာအုပ်ဆိုတာကလည်း သူပြသလောက်ကြည့်ရတာလေ ၊ သင်တန်းဆိုတာကလည်း ဘယ်လောက်ကောင်းအောင်သင်သင် ကိုယ်ပြန်မကြည့်ဖြစ်ရင် ရေးတေးတေးပြန်ကျန်တော့မှာ။ ဒီတော့ ကိုယ်ဖာသာကိုယ် distro တစ်ခုတင်လိုက်ရင် စလေ့လာလို ့ရပါပြီ။ ဒီကြားထဲမှာ စာအုပ်လည်းဖတ်ပေါ့ဗျာ။ သင်တန်းကတော့ ကျွန်တော်လည်းမတက်ဖူးလို ့မပြောတက်ဖူး။ distro အနေနဲ ့ဆိုရင် စသုံးတဲ့သူတွေအတွက်က ubuntu ကအကောင်းဆုံးပါပဲ။ supporting လည်းကောင်းတာကိုး။ မြန်မာလို မေးရင်တောင် တော်တော်များများ ဖြေထားတာတွေရှိပါတယ်။ ကျန်တဲ့ distro ကတော့ ubuntu ထက်စာရင်ရှားမယ်ထင်တယ်။ တင်တာ မှားသွားမှာစိုးရင် ့လည်း wubi နဲ ့တင်ပေါ့ဗျာ။ Wubi နဲ ့ဆို next နှိပ်တက်ရုံလောက်နဲ့installation အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ubuntu ဆို ကိုလူပျှီကြီးနဲ့ကိုစေတန်တို့ဒိုင်ခံဖြေပေးလိမ့်မယ် (အချွန်နဲ ့မလိုက်ပြီ :P )
Linux နဲ့ပတ်သတ်ပြီးသိချင်ရင် Www.Ubuntu4MM.org ကအကောင်းဆုံးပါပဲ
အချွန်နဲ့ ထပ်မလိုက်အုံးမယ် ... Ubuntu နဲ့ပတ်သတ်ရင် ပိုသိတာက ကိုကိုရဲပါ။
ရန်ကုန်မှာ Ubuntu ပွဲတွေလည်း သူပဲဦးဆောင်ပြီးလုပ်နေတာပါ ... သူ့ Gmail က [email protected] ပါ။
ubuntu ဆို ကိုလူပျှီကြီးနဲ့ကိုစေတန်တို့ထိုင်ခံဖြေပေးလိမ့်မယ် (အချွန်နဲ ့မလိုက်ပြီ :P )
စားလုံးပေါင်းကို ဒိုင်ခံ လို့ပြင်ပါဦးဟ။ စေတန်နဲ့ ကျုပ်နဲ့ စကားလုံးမြင်ပြီး ဘာပြောရမှန်းမသိတော့ဘူး
ကျွန်တော်ဆီမှာတော့ linux os အကြောင်း မြန်မာလိုရေးထားတာရှိတယ်။လိုချင်ရင်တင်ပေးလိုက်မယ်။
ဆောရီးဗျို့ပြင်လိုက်ပြီ